Banyere Anyị - Shenzhen Ariza Electronic Co., Ltd
Shenzhen Ariza Electronic Co., Ltd e hiwere na 2009 na ya factory bụ na Shenzhen. With10 afọ mmepe, si OEM ka ODM, anyị na-akwụ ndị na-anya ọhụrụ ngwaahịa mmepe, e mere dị iche iche na-ewu ewu ụdị na Ariza atụmatụ na aka na nchọpụta Kemịkalụ, a niile ụdị na-ukwuu mma site anyị ahịa ná mba ọ bụla.
O Ua ozi bụ inyere onye ọ bụla na-ebi ndụ a mma ndụ. Anyị na-enye ihe kasị mma na-na-na klas nchedo, n'ụlọ nche, na ndị mmanye iwu na ngwaahịa jirichaa nchekwa gị. Anyị na-agbalịsi ike ịkụziri ma na-enye ndị ahịa anyị - nke mere na, na ihu nke ize ndụ, gị na ndị a hụrụ n'anya na-onwem na ọ bụghị naanị ike na ngwaahịa, ma ihe ọmụma ka mma. Anyị kwenyere na onye ọ bụla ga-echebe ya mere, ha nwere ike na-ebi ndụ a mma, ike ndụ na udo nke uche.
ibu ọrụ anyị
A riza na-agba mbọ na-elu àgwà nke ngwaahịa na-enye zuru okè ọrụ na ngwọta, na-abụ mgbe nile ike izute ndị ahịa mkpa. Maka inye ihe adaba ọrụ, Ariza ka ẹkenam a dịgasị iche iche nke ọhụrụ B2B na B2C sales ụzọ. Na-aga n'ihu ọhụrụ na-achụ nke izu okè, Ariza ka nwere ọkachamara Quality Management System kemgbe ike. Anyị ọma nwetara asambodo nke ISO9001 OA RoHS FCC SGS.